Oats for fardo: sida, intee, goorma iyo sababta loo siinayo. | Fardaha Noti
Jenny monge | | Quudinta
Quudinta fardahayagu waa wax marwalba naga walwal qaba. Waa maxay badarka la bixiyaa, saami intee leeg? Miyey ka helayaan macdanta iyo fiitamiinnada lagama maarmaanka u ah cunnadooda? Ma leeyihiin dhaliilo? Miyaa la siiyaa wax dheeri ah?
Qodobkaan aan ka hadalno dalag gaar ah: miro. Khubarada qaar waxay kugula talinayaan badarkaan inuu yahay midka ugu haboon. Si kastaba ha noqotee, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka oats ee faraskeennu waxay in badan ku xiran yihiin xaaladdiisa jir ahaaneed, dabeecadda iyo waxqabadka. Aynu aragno waxa ay ka bixiso isku midkeenna!
Marka la go'aaminayo midka ugu habboon cuntada fardahayaga, waa inaan maanka ku haynaa sifooyinka jir ahaaneed ee nidaamka dheef-shiidka: qayilaad iyo taxaddar taxaddar leh, calool awood yar oo ay tahay in la faaruqiyaa dhowr jeer maalintii, xiidmaha yar ee sameeya dheefshiidka enzymes-ka iyo kursiga weyn ee lagu weerarayo microbial-ka iyo halka ay cuntada ku khafiifayso.
Dhamaanteed waxay ka dhigaysaa xayawaanadan inay u nugul yihiin dhibaatooyinka safarka cuntada iyo isbeddellada sida calool istaagga, caloosha, iwm.
Cunnadooda waa inay ahaataa mid isku dheelitiran waxayna ku xirnaan doontaa haddii xayawaankeennu sameeyo dhaqdhaqaaq xoog leh iyo in kale. Halkani waa halka ay ciyaarta ka soo galaan badarka badarka oo matala il muhiim ah oo tamar ah fardahaas u baahan heer sare oo tamar ah, tusaale ahaan ciyaartooyda.
Waxaan si faahfaahsan u arki doonaa astaamaha oats ee qayb ka ah quudinta cunnada.
1 Oats fardaha
2 Faa'iidooyinka ay u keento fardaha
3 Goorma iyo sidee loo siinayaa oats fardaheena?
4 Sii oatmeal markii ugu horeysay
5 Noocyada boorashka
Boorashku waa a hadhuudh aad u badan oo ku jira cuntada isku dheellitiran. Waxa weheliya shaciir, galley ama sarreen, waa mid ka mid ah miraha ugu muhiimsan ee xayawaankeenna.
Waxay ka koobantahay karbohaydraytyo badan sida istaarijka, kaas oo biyo galin doona loona jajabin doono sonkor, a isha tamarta lagama maarmaanka u ah murqaha shaqada iyo waxqabadka faraska. Waxay muhiim u tahay fardahaas isboortiga ee tamarta si dhakhso leh u sii daaya, tusaale ahaan orodka.
Astaamaha oats awgood, fardaha waxaa lagu qasbay inay si fiican u calashaan, sidaas awgeedna waxay dhiirrigeliyaan dheef-shiidka. Sidoo kale, sida ay Piensos Pavo ugu magacdartay boggeeda, sonkorta waxay kobcisaa maskaxda iyadoo soo saarta serotonin. Waa wax iska caadi ah fardaha qaarkood inay dareemaan inay saameyn ku leeyihiin ka dib markay cunayaan miro, tan iyo serotonin waa "hormoonka farxadda." Gaar ahaan fardaha firfircoon waxay noqon karaan kuwo kacsan ama kacsan ka dib markay liqaan miro ama dalagyo kale oo ay ku jiraan istaarij.
Faa'iidooyinka ay u keento fardaha
Oats waxaa ku jira a boqolkiiba sare ee dufanka, maxaa loo wareejiyaa timo dhalaalaya.
Istaarijka ku jira miraha si fudud ayaa loo dheefshiido marka loo eego miraha kale, sidaas awgeed sonkorta ayaa u kala jaba dhibaato la'aan waxayna si dhakhso leh u galeysaa dhiigga ka dib marka la cuno. Tani waxay keenaysaa wuxuu faraska siiyaa tamar si dhakhso leh, taas oo ku habboon fardaha cayaaraha.
Ka kooban a fiirsashada sare ee fiberka iyo fiber cayriin marka loo eego miraha kale. Heer sare oo faybar ah ayaa lagama maarmaan u ah kahortagga dhibaatooyinka dheef-shiidka.
Sonkorta jirka ku jirta waxay kicisaa soosaarka serotonin, oo loo yaqaan hormoonka farxadda. Saameyntani way ka duwan tahay muunad kasta qaarna waxay noqon karaan kuwo si xamaasad leh u faraxsan. Sababtaas awgeed, milkiileyaal badan ayaa u arka in fardahoodu u jeestaan ​​cunista miraha.. Haddii xiisahaas la buunbuuniyo oo ay dhibaato dhacdo, waxaa jira dariiqyo kale oo loogu talagalay quudinta fardaha bilaa boorash iyo xitaa sokorta ama istaarijka la'aan.
Goorma iyo sidee loo siinayaa oats fardaheena?
Waxaa jira sug inta u dhexeysa saacad iyo bar iyo labo saacadood jimicsiga ka dib si aad fardaha u quudiso. Sidoo kale waa inaan ku taxaddarnaa biyaha oo aan iska ilaalino isticmaalka badan ee daalka awgiis. Sug inta farasku neefsanayo inuu nasto intaadan biyaha siin.
La oatmeal Maaha mid ku habboon koritaanka digaaga, sidaa darteed waxaa fiican in la sugo inta neefkeennu qaangaarka ka noqonayo si loo bilaabo keenistiisa. Iskusoo wada duuboo, waxay noqon doontaa cunno u roonaan doonta faraskeena haddii uu jimicsi aad u tiro badan sameeyo maalin walbana u baahan yahay tamar. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer Quudinta waa in lagu cabiraa hadba baahida faraska. Dareenkan, way ku habboon tahay in lagu falanqeeyo calafka xoolaha si loo ogaado cilladaha nafaqada ee suurtogalka ah.
In kasta oo boorashku faa'iido u leeyahay fardaheena isboorti, haddana waa inaan ogaanno sida loo bixiyo. Badarkaan waxaa ku jira fosfooras ka badan kaalshiyamka. Sababtoo ah waa in lagu daraa cuntooyinka kale ee ka kooban kaalshiyam ka badan fosfooraska sida alfalfa. Waxyaabaha ugu habboon ee loogu talagalay adeegsiga isu-dheellitirka ee kalsiyum iyo fosfooraska waa 2 qaybood oo miro ah 1 alfalfa ah.
Sii oatmeal markii ugu horeysay
Ahaanshaha badarka borotiinku ku badan yahay, haddii faraskaagu uusan cunin miro kahor, waa inaad ku darto cunnadiisa tartiib tartiib ah iyo tiro yar. Qiyaastii 100 garaam maalintii toddobaad iyo badh Waxay kugula talin laheyd, markaa waa inaad tagtaa si tartiib tartiib ah u kordhisa qaddarka usbuucyada u dhexeeya ama toddobaad iyo badh.
Isbaanishka waxaan ka heli karnaa miro caddaan, dahab iyo madow. Dhaqan ahaan, tan ugu ballaaran ee la isticmaalo waa caddaan, halka waddamada sida Faransiiska, madow loo doortay. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ka heli karnaa habab kala duwan oo raashinkan aan ku geyn karno suuqa, tusaale ahaan jajab ama miro la jarjaray.
Iska yaree miro: Sidan oo loo bixiyo oats waa in la siiyo geedka halkii hadhuudhka. Warshadda oat waxay leedahay fiber badan waxayna waxtar u leedahay dheefshiidka.
Boorash: Hadhuudh dhan oo hadhuudh ah ayaa la bixin karaa dhulka, qoyan, diirmay ama micronized. Xaaladdan oo kale, qolofka waa la furay xayawaankuna si fiican ayuu u dheefshiidi karaa hadhuudhka..
Oats oo dhan waa in loo keenaa sidii boorash oo aan lahayn budo, oo leh gabi ahaanba iyo marada wanaagsan. Sidaan soo sheegnayba, si loo helo oats, waa in had iyo jeer lagu daraa cuntooyinka kale si faraskeennu u helo dhammaan nafaqooyinka lagama maarmaanka ah. Tan waxaa lagu gaari karaa iyadoo la falanqeeyo quudinta iyo bixinta quudinta ama kaabisyada nafaqooyinka ka maqan xayawaankeenna.
Si aad wax badan uga ogaato quudinta iyo dheefshiidka fardaha, waxaad ka ogaan kartaa imisa calool ayaa faras leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Quudinta » Oats Faras, waa qayb dhaqameed ka mid ah cuntadooda